Talooyin ku saabsan mail u cusboonaysiinta cusub ee Mac marnaba ma ogid!
Mac Mail waa mid ka mid ah barnaamijyada mail ugu fudud ee ay u isticmaalaan, ku siinaya si buuxda uga taliso sida aad u cid dir oo soo hesho mail. Laga soo bilaabo saxiixyada aad astaysto, in xeerar aad u hagaajin karo ku salaysan oo la aad e-mail u diraya, waxaa jira macno ahaan waxba ma aadan sameyn karin, e-mail oo hadlaya, iyadoo Mac Mail.
Si aad u hesho gacanka ku Mac Mail inkastoo, waxaad u baahan tahay in ay faham adag oo ku saabsan sida ay u raaxayn aad mail. Dhiig mail kuu ogolaanaya in aad si aad u aragto waxa mail aad leedahay waa cusub, si fudud oo dhaqso.
Fur Mac Mail.
Hubi in aad ku xiran yihiin Internet-ka.
Riix badhanka Refresh Mail, oo ku yaalla geeska bidix ee kore ee suuqa.
Haddii kale, waxaad u tagi kartaa Menu boostada, ka dibna riix Hel All New Mail. Ikhtiyaar kale waxa weeye in aad riixi kartaa Aayad Apple ah, Button Shift iyo button N si aad u hesho cusub aad boostada.
Haddii aad jeclaan lahayd in ay si toos ah u dhigay, waa mid aad u fudud in la sameeyo. Simple tagaan si aad rabtid, kadibna dooran Guud. Marka ay jiraan, waxaad dooran kartaa in ay mail toos ah ku nastay hal daqiiqad kasta, shan daqiiqo, 10 daqiiqo ama 30 daqiiqo.
Waxaa jira arrimo soo bixi kara marka aad raadinayso in ay u raaxayn aad Mac Mail. Qaar ka mid ah arimahan ka mid ah:
Anigu ma heli karo aan Mac Mail raaxayn button. Haddii ay taasi dhacdo, waa arin aad u fudud. Dhammaan waxay ka dhigan tahay waa in aad ku bartey aad button helid qarsoon. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad tusto toolbar, oo aad samayn kartaa adigoo xaq-ilamaha iyo gujinaya Customize Toolbar. Markaas, waxaad dooran icon ka mid ah liiska oo aad u jiidin toolbar oo ugu sarreeya.
Riixaayo galuuska Refresh ma Waxba. Tani waxay dhici kartaa, oo mararka qaarkood jidka keliya ee si aad u hesho farriimo cusub waa in ay dib uga bilowdo barnaamijka, laakiin tani ma aha xal fiican. Workaround kale waa in Tag menu boostada, koontooyinka dhammaan qaadan offline, markaas dooran boostada oo dhan Accounts Online. Inta badan, aad dhibaato ka qabo sirta ah, si loo hubiyo double sirta ah si aad u hubiso inay si sax ah ku soo gashay.
Mar kasta oo aan u raaxayn lahaa, waxaan u leeyihiin in ay geliyey inaan password. Dhibaatada kale ee caadiga ah, laakiin waxaa loo hagaajin karaa iyadoo la cadeeyo goobaha aad. Haddii ay taasi ma lagu xalliyo arrimaha ka, waxaad u baahan tahay in ay dib sirta ah cinwaanka e-mail aad ku riday cinwaanka cusub Mail.
Fariimaha New e-mail aan la helin ilaa Mail ayaa la tago iyo dib-u-furay. Haddii tani ay tahay dhibaatada, waxaad tegi kartaa boostada iyo dooran qaado All Accounts offline. Markaas, dib boostada tago oo Dooro Get All New Mail.
Mail yimaado, laakiin ma muujiyaan aan kor ku mailkooda. Dhibaatada kale ee waa marka aad riix badhanka baqshadda, waxa ay sheegtay in ay jirto mail cusub ee mailkooda laakiin mail lahayn waa in mailkooda ah. Haddii user ka yeerto oo ka mid mailkooda si ay gal ah oo kala duwan, ka dibna dib ugu mailkooda ah, mail cusub ayaa muujinaya kor. Haddii ay taasi waa dhibaato aad la xiriirayso, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo update ee ugu danbeysay ee Apple Mail.
> Resource > Mac > shaandheen New Mail ee Mac Mail